Qaraxyo lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada AMISOM | SMC
Home WARARKA MAANTA Qaraxyo lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada AMISOM
Qaraxyo lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada AMISOM
Waaberigii hore ee saaka ayaa waxaa qaraxyo waaweyn laga maqlay Saldhiga Ciidamo katirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ku leeyihiin degmada Baraawe oo ah Xarunta Rasmiga ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxyadaas,waxaana Baraha Wararkooda ay ku faafiyaan lagu sheegay in laba Gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ay ku weerareen Xerada,isla markaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen Ciidanka Uganda oo ka tirsan AMISOM.
Dadka degmada Baraawe qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa qaraxyada,hayeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay,waxaana degan xaalada Magaalada maadaama Saldhiga uu ku yaalla banaanka degmada Baraawe.
Maamulka degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose weli kama hadlin weerarada ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday Saldhiga weyn ee Ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmadaas.
Previous articleTaliye C/Xamiid oo sheegay in Al-Shabaab Todobaad Gudihiis uga saarayaan Sh/Hoose
Next articleCiidanka dowladda oo Shacab ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay